Olee otú iji tọghata MTS ka DVD na MTS ka DVD Ntụgharị (Windows 10 gụnyere)
> Resource> DVD> Olee otú iji tọghata MTS ka DVD ọsọ ọsọ na mfe (Windows 10 gụnyere)
Olee otú iji tọghata MTS ka DVD ọsọ ọsọ na mfe (Windows 10 gụnyere)
"M nwere a Canon HF100 nke gbara vidiyo na .mts. Na m nwere ike tọghata MTS ka DVD. Olee otú iji ọkụ ha ka ha DVD-RW discs ka m nwere ike na-etinye ha na m DVD ọkpụkpọ na-egwu ha? Gịnị software kwesịrị m na-eji? "
Ebe ọ bụ na HD camcorders dị nnọọ ewu ewu n'oge ahụ, ọtụtụ ndị nwere otutu MTS video faịlụ na-achọ ịkọrọ ndị a videos ezinụlọ na ndị enyi na TV. Ihe ngwọta kasị mma bụ na-esure MTS ka DVD n'ihi nzube a. Ime ya, ihe dị anyị mkpa bụ ọkachamara MTS DVD Ntụgharị, na Wondershare DVD Creator bụ nanị zuru okè otu. Nke a na usoro ike ọ bụghị naanị tọghata MTS video ka DVD, kamakwa nwere ike ire ndị ọzọ nile na-ewu ewu vidiyo na DVD enweghị adịkwa video àgwà, video formats dị ka MP4, AVI, MOV, MKV, VOB, wdg na-niile na-akwado. Nweta ya na-amalite ike DVD si MTS faịlụ na ala. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike na-atụgharị DVD Creator for Mac dị ka ihe MTS Ntụgharị na DVD burner.
Free download MTS ka DVD Ntụgharị (Windows 8 na-akwado):
Olee otú iji tọghata na ọkụ MTS ka DVD:
N'okpuru ebe a bụ ndị nduzi na converting MTS faịlụ ka DVD na Windows PC. Dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version nke MTS ka DVD burner maka kọmputa gị.
Nzọụkwụ 1. Tinye MTS / M2TS faịlụ
Pịa "Import" ịgbakwunye MTS videos ka DVD Creator na-eme ka a MTS DVD diski. N'oge usoro, ị nwere ike hazie gị vidiyo site cropping, n'usoro n'usoro, trimming, itinye video mmetụta, wdg
Nzọụkwụ 2. Hazie DVD menus
Họrọ a DVD menu n'ihi na gị DVD. 40 free DVD menu ndebiri na-nyere na nke a DVD Creator. I nwekwara ike hazie DVD menu site na-agbanwe buttons, okpokolo agba, ndabere, thumbnails, wdg Tinye a n'okirikiri gị DVD-eme ka ọ ọzọ mara mma. Iji mee ka MTS DVD na DVD menu, họrọ "Ọ dịghị NchNhr" template.
Nzọụkwụ 3. tọghata MTS ka DVD
Pịa ịhụchalụ n'ihi nke edezi bụrụ na i nwere ike mma ya na a ụfọdụ ụzọ. N'ikpeazụ, ị pụrụ nnọọ na-aga na "Ọkụ" taabụ na-eme ka DVD si MTS faịlụ kwukwara na usoro.
Atụmatụ: 1. The green diski ohere mmanya na ala ga-egosi gị free ohere nke diski; Ị nwere ike ịhọrọ hà ọhụrụ DVD n'etiti "DVD-R4.5G" na "DVD-R9.0G"; 2. The mmepụta àgwà nke na-ere ọkụ DVD bụkwa ruo gị oke, ị pụrụ họrọ "Ọkọlọtọ video àgwà", "High video àgwà" ma ọ bụ "kwesịrị ekwesị diski". 3. All diski ụdị dị, gụnyere DVD-R, DVD + R, DVD-RW, DVD + RW, wdg ka ogologo oge gị DVD burner akwado ya.
Ihe Ọmụma nkekọrịta: Gịnị bụ MTS?
MTS bụ a faịlụ ndọtị maka elu definition dijitalụ video igwefoto edekọ usoro. HD camcorders dị ka Canon Vixia HG21, Canon Vixia HF S100, Canon HR10, Canon HF10, Canon HF100, Panasonic AG-HSC1U, Panasonic HDC-DX3, Panasonic Lumix DMC-ZS3, Panasonic HDC-DX1, Sony HDR-SR1, Sony HDR- UX5, UX7, Sony HDR-SR11, SR12, wdg na-emepụta vidiyo na .mts / m2ts ndọtị.
Tọghata MTS ka flv: Nke a MTS ka FLV Ntụgharị enyere iji tọghata camcorder video enyi na enyi n'ihi na weebụsaịtị na zuru okè mma.
Olee otú iji tọghata BDMV ka AVI, MP4, MOV wdg: tọghata BDMV faịlụ ka AVI, MP4, MOV na fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ na-ewu ewu, ọkọlọtọ video formats na oké BDMV Ntụgharị.
Tọghata MTS ka DV: tọghata MTS faịlụ ka DV maka importing ha n'ime video edezi ngwaọrụ dị ka iMovie, Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro.
Tọghata MTS ka AVI Free na Mfe: Chọrọ iji tọghata MTS ka AVI free maka ihe adaba playback? Lelee ngwọta ebe a.
Tọghata MTS ọ bụla Format on Mac: Wondershare MTS Ntụgharị maka Mac-enye gị ohere iji tọghata MTS ọ bụla audio / video format ma ọ bụ ngwaọrụ wdg
TOP 5 Free MTS Ntụgharị
Olee otú iji tọghata AVCHD ka DVD na Mac / Win (Windows 10 gụnyere)
Otú nyefee camcorder Video ka DVD
Download kasị DVD burner maka Win / Mac
Olee otú Ọkụ Photos ka DVD na ikwu n'ụzọ na Music
Olee otú Iji Mee Own Video DVD
Olee otú Detuo DVD on OS X Mavericks
Nero vs Roxio - nke dị mma maka DVD-ere Ọkụ?
iDVD Alternative: DVD-ere Ọkụ Software mma karịa iDVD (Yosemite gụnyere)
MPEG4 burner: Olee otú iji tọghata MPEG4 ka DVD
Olee otú Play Blu-ray On PC
Olee otú iji tọghata ASF ka DVD